Cobalt Digital is one of the recipients of the 70th Annual Technology & Engineering Emmy® Awards that will take place in partnership with the National Association of Broadcasters (NAB), at the họpụtara Gosi at the Wynn Encore Hotel and Spa on Sunday, April 7th, 2019 in Las Vegas, NV.
Banyere Cobalt Digital
Cobalt Digital Inc. aghụghọ na manufactures award-emeri 12G / 3G /HD/SD and IP-based conversion, terminal, throwdown, and multiviewer technology for the live production and broadcast television environment. As a founding partner in the openGear® initiative, Cobalt offers a full range of openGear video and audio processing card solutions for applications such as closed-caption compliance monitoring, OB production, master control, HD mmepụta akụkọ, mgbasa ozi mgbaàmà, ụda olu, na mgbazi agba. Ngalaba Cobalt nke Blue Box Group ™ nke na-agbanwe usoro mgbasa ozi na-eme ka ọ dị mfe ma mee ka dịgasị iche iche nke 12G / 3G /HD/ SD na ntọala IP na ọrụ ọrụ ụgbọelu. Ihe nhazi ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ ahụ na-eme ka ikike dị iche iche na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ na-achọsi ike na gburugburu ebe obibi. Ekekọrịta site na netwọk zuru ụwa ọnụ nke ndị na-ere ahịa, ndị na-emekọrịta ihe ọnụ, na ndị mmekọ ndị ọzọ, Cobalt Digital ngwaahịa na-kụziri na a afọ ise akwụkwọ ikike. More ọmụma dị na www.cobaltdigital.com .
2016 họpụtara Gosi 2016 họpụtara Gosi Job Fair 2016 họpụtara Gosi News Broadcast Naa Awards Broadcast Naa Magazine Broadcast Engineer Broadcast Engineering Broadcasters Convention Broadcasting Broadcasting Convention nhazi usoro mgbaama Nzipu Vidiyo IP họpụtara 2015 họpụtara 2016 họpụtara Gosi Họpụtara Gosi 2016 họpụtara show ọrụ NAB16 nabshow video Engineer	2018-12-05
Osote: Digital Nirvana 2018 Year End Recap